Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sida Loogu Xulo Qasabadaha Saxda ah ee Basaskaaga
2020 / 11 / 16 QoondayntaTilmaamaha qasabada 10125 0
Tuubbada hoose ee hoose ayaa laga yaabaa inay ogeysiiskaaga ka dhigto saamiyada naqshadaynta, laakiin maaddaama musqusha ay tahay qayb ka mid ah gurigaaga oo aad isticmaasho maalin kasta, waxaa habboon in aad waqtigaaga iyo dadaalkaaga qaadatid si aad u ogaatid kuwa sii wadi doona inay si guul leh ugu shaqeeyaan naqshadaynta gudaha iyo qaab nololeedka. Haddii aad cusbooneysiineyso musqusha oo dhan ama aad dib u cusbooneysiineyso qorshe hore, qasabadaha aad u doorato weelkaaga ayaa isbeddel muuqda ku sameyn kara natiijada la qabtay. Si caqli gal ah u maal gasho, oo lagu daro waa inay si fiican u sii socdaan wakhti dheer soo socda. Halkan, seddex khabiir ayaa muujinaya talooyinkooda sare ee ku saabsan sida looga caawiyo sameynta xulashada saxda ah.
Ogow taada qasabadaha qasniinka iibinta internetka
1 Qasabadaha tiirka
Badanaa musqulaha qaab dhaqameedka ah, tubbada tiirarka waxay u yimaadaan labo labo waxayna ka kooban yihiin hal taabasho biyo qabow iyo mid kale oo kulul. Waxaa ku shaqeeya wareejinta wareejinta ama kabaalka, tubbada tiirarka waxay u baahan tahay laba god oo qasacad ah oo ku jira saxanka.
2 qasabadaha Monobloc
Ku habboon saxannada leh hal farqiga taabashada, taabashada monobloc waxay leedahay hal xabo oo siiya noocyo kala duwan oo biyo kulul iyo qabow. Sida aad halkan ku arki karto, xakamaynta biyuhu waxay ku dhisan tahay jirkaaga taabashada, iyadoo soo saareysa xalka caqliga badan, ee keydinta boos bannaan. Haddii aad rabto inaad weelkaaga ka dhigto mid gebi ahaanba nadiif ah, xitaa waad awoodi kartaa inaad dhajisid tuubadaada monobloc.
3 qasabadaha wax lagu qaso
Inta badan sida qasabadaha monobloc, qasabadaha wax lagu shiido waxay keenaan isku dar ah biyo kulul iyo qabow iyada oo loo marayo shaqsi shaqsiyeed. Si ka duwan qasabadaha monobloc, si kastaba ha noqotee, qasiyayaashu waxay kala qaybiyeen goobo biyo ah. Milkiilayaasha musqusha waxay doortaan qasabad saddex-godle ah, oo leh gacmo gooni ah oo loogu talagalay biyo kulul iyo qabow. Haddii kale, iska hubi qasabadda mashiinka qodista ee laba-god ah, oo ay koontarool ku koontaroolaan.
Dhab ahaan dib-u-habeyn kasta oo musqusha ah, qasabadaha ayaa ah dahabka taajkii. Waxaa laga heli karaa qaabab qurux badan oo tirooyin iyo dhammeyn ah, xitaa qasabadaha qiimaha yar ee qaaliga ah waxay soo bandhigaan adduunyo suurtagal ah. Kudar xulashooyinka isdhexgalka iyo ilaalinta biyaha caadiga ah, tuubbooyinka musqusha ee maanta waxay bixiyaan milkiileyaasha guryaha si kasta oo ku habboon.
Kahor intaadan dooran qasabadaha musqusha, waa inaad fiirisaa dhowr arrimood, sida haddii aad isticmaaleyso saxanka horay u sii jiray ama aad mid cusub iibsaneyso, halkaas ayaa laga furi doonaa qasabadda. Waxaad sidoo kale u baahan kartaa inaad tixgeliso astaamaha aad rabto, iyo sidoo kale inta qasabad ee dhaqaalahaagu kuu oggol yahay. Tixgelinnada kale waa cabbirka musqulahaaga iyo noocyada qasabadaha sida caadiga ah ka jira guryaha la midka ah ee gudaha ka jira.
Haddii aad dib-ugu-habaynayso qasabad cusub saxanka jira ama aad iibsanayso isku-xidhka weelka dhammaystiran, hubi inaad u dhigmayso nooc ka mid ah tuubada meelaha bannaan ee ku yaal saxankaaga.
Tuubbooyinka god-godka ah waxay ku daraan tufka iyo isku-darka gacmo-badanaa hal kabaal-hal shey oo u baahan oo keliya 1 farqiga godka lagu qoday. Dib-u-qaabeynta, moodooyinka qaarkood waxay ku daraan saxan qayb hoose ah oo daboolaya furitaanka saddexda god ee jira. Tuubbooyinka god-godka ah ayaa ku habboon waaskadaha yaryar, sida qolka maydhashada qolka budada. Fudeyntoodu waxay muujineysaa dareenka casriga ah.
Qasabadaha xarunta la dhigay waxay ku habboon yihiin saxammada saddexda god leh ee caadiga ah (oo leh godad dibedda laga qoday 4 inji oo kala fog). Waxay lahaan doonaan kabaal keli ah ama laba gacan oo lagu dhejiyay saxan 6-inji ah. Waxay ku habboon yihiin inta badan musqulaha.
Fiditaano fidsan ayaa leh saddex shay oo kala duwan: Laba gacan qabsi iyo xuubka. Masaafada caadiga ah ee u dhaxeysa gacmaha waxay gaarayaan ugu yaraan 8 inji, saddexda qayboodna waxay leeyihiin u janjeera inay ka weynaadaan noocyada kale ee tuubbooyinka qubeyska. Noocyada yaryar, oo loo yaqaan 'minispreads', ayaa loogu talagalay godadka caadiga ah ee lagu qodayo 4 inji oo kala fog.
Walxaha qasabada ee Wall Mount waxay heleen caan caan ah oo ay weheliyaan maraakiibta xamuulka qaada ama nooca weelka ee doonaya taakuleynta dhaadheer ee dheereeya in ka badan inta ugu caansan ee baaquli.
Ha u maleynin in qalabka tubbada oo dhan si fudud loo kala saari karo. Kohler, tusaale ahaan, wuxuu sameeyaa qasabad ku dhexjira golaha wasakhda qaabdhismeedka darbiga. Wax kasta oo aad aragto waa xakamaynta xakamaynta dhaqdhaqaaqa yar ee ka soo baxa hoosta muuqaalkaaga muraayadda.
Akhbaarta wanaagsan: Qiiradooda ku aaddan inay alaab cusub suuqa keenaan, soo saarayaasha qalabka ayaa abuuray fursado dhammaystiran oo ka badan kuwa loo yaqaan 'Sweetheart Gaga'. Sababtoo ah shaashadda casriga ah ee jaakadaha cad-cad, xitaa qasabadaha aan qaaliga ahayn waxay ku faani karaan dammaanad noloshooda dhammaadkooda.
Warka xun: Waa inaad ka doorataa cornucopia maskax-maskaxeed oo suurtagal ah oo ay ka mid yihiin chrome dhalaalaya (hal-abuurka warshadaha muddada dheer), chrome burush, nikkel nadiif ah, nikkel caday, nikeel la dubay, bir bir ah, naxaas, naxaas la caday , naxaas saliid lagu duubay, naxaas la safeeyey, madow, caddaan iyo dhoobada qurxinta.
Yeynaan iska indha tirin qalinka, oo maanta loo qaadan karo maalgashi iyo doorbid qurxin.
Haddii xulashooyinka ay ku siinayaan culeys maskaxeed, iskuday tilmaamahan go'aan qaadashada:
Iska ilow walxaha oo xoogga saar muuqaalka. Tag qolka bandhigga halkaas oo dhammaan dhammeystirka lagu soo bandhigayo, dooro midka ugu weyn ee aad simistarka si qoto dheer u jeceshahay.
Isku dubbar dhig dhammaan dhammeystirkaaga musqusha kasta taas oo macnaheedu yahay in meelahaaga adag - oo ay ku jiraan baararka shukumaanka, qalabka nalalka iyo qalabka albaabka ay leeyihiin dhammaad isku mid ah.
Dhammaystirka dhammaystiran waa dhadhan fiican laakiin waxay u baahan yihiin dayactir joogto ah si ay ugu ekaadaan inay dhalaalayaan
Dhamaadka burushka ayaa ka fiican qarinta dhibcaha biyaha iyo faraha, taas oo aad u fiican haddii aad carruur leedahay
Qalabka Musqusha: MAXAAD U BAAHAN TAHAY IN AAD OGAATO
Fursadaha Qolka Musqusha
Xulashada Musqusha Musqusha
Qalabka Musqusha ee Musqusha iyo Noocyada
Musqusha Dhagxaanta Granite
Musqusha Qolka Musqusha
Musqusha Musqusha hoosteeda
Fikradaha Nalalka Musqusha
Layaab malahan, in badan oo nashqadeynta nashqadeynta ah ayaa kujirta qulqulka, iyo hordhaca udambeeyay waxaa kamid ah iskutallaabyo keenaya biyo caadi ah dhuumaha cidhiidhiga ah, qulqulka furan iyo marinada rooga-coaster-ka. Qasabadaha gacanta lagu xidho ayaa ka soo guuray jikadaada oo aaday musqusha, taas oo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay inaadan cadaygaaga u rarin durdurka.
Hore:: TILMAANKA Iibsiga ugu wanaagsan ee foosto Next: SIDEE LOOGU DOORAN KARAA QAADKA BATHROOM-KA
2021 / 02 / 04 13438